အိပ်မက်များကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်း - For her Myanmar
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် လက်ခုပ်တီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘာလို့ ကန့်သတ်နေရတာလဲ။ ကိုယ်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေဘာလို့ နည်းပါးနေရတာလဲ။ ကိုယ့်အိပ်မက်ကို ကိုယ် ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး။
စိတ်ပညာဗေဒမှာသုံးတဲ့ သိပ်လှတဲ့ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်။ ‘Nurture the Nature.’ – ‘သဘာဝကို မြေတောင်မြှောက်ပေးပါ’ တဲ့။ သဘာဝဆိုတာ ဘာလဲ။ သဘာဝဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရာပါ အရည်အသွေး၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ပါရမီတွေပါ။ ဒါဆိုမြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ဆိုတာကရော? ဒါကျတော့ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်း၊ အသိုင်းအဝိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စတာတွေရဲ့ အားပေးမှု၊ ထောက်ခံမှုတွေ လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကလည်း သူများဖြစ်မြောက်တာကို ဝမ်းသာပေးဖို့ထက် ဝေဖန်လိုက်မယ်၊ ရှုံ့ချလိုက်မယ်၊ ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကို ပိုအားသန်နေကြတာပဲ။ အားပေးရမယ့်အစား Hate speech တွေဖြန့်ရတာကို ပိုခုံမင်ကြပါတယ်။ လက်ခံပေးရမယ့်အစား တွန်းထုတ်ကြတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကွဲပြားတာနဲ့ပဲ တစ်ဆင့်နိမ့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဆွဲချကြတယ်။ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဆိုတော့ အများစုက အဲ့လိုဖြစ်နေလာကြတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်သဘာဝကို ကိုယ်တိုင် မြေတောင်မြှောက်မှပဲ အပင်ပေါက်မယ့်ကိန်း ဆိုက်လာပါပြီ။ ငါ့ကိုတော့ဖြင့် ဘယ်သူက မပံ့ပိုးဘူး၊ ဘယ်သူက မထောက်ခံဘူး၊ ဘယ်သူက အားမပေးလို့ ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ရှုံးပါပြီ။ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ သဘာဝအတိုင်း အညွန့်တလူလူပေါက်ရမယ့် အပင်ဟာ သူများကျွေးတဲ့ ဓါတ်မတည့် မြေသြဇာတွေစားပြီး ပိန်ပိန်လိန်လိန်နဲ့ အသီးမအောင်ဘဲ ရှင်တယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ ဆက်သွားရတော့မှာပါ။ အဲဒီတော့ သူများလက်ခုပ်တီးပေးတာကို ထိုင်မစောင့်ပါနဲ့တော့၊ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် လက်ခုပ်တီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါ သတ္တိနဲ့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတာကိုပါ သင်ယူလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> ငယ်ငယ်တုန်းက မက်ခဲ့တဲ့ လေထဲက အိပ်မက်များ
ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့လိုလာပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးပါ။ ကိုယ်ဘာအတွက် စိတ်အားထက်သန်လဲ။ ကိုယ်ဘယ်လို နာမည်အတပ်ခံချင်လဲ။ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်လွန်းလို့ သူတို့အတွက် ကူကယ်ရာတစ်ခုအဖြစ် ရှင်သန်ချင်တာလား။ ကင်မရာရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကိုယ့်နှလုံးခုန်သံတွေ မြန်နေသလား။ ငယ်ငယ်တည်းက တူရိယာတွေကို တီးမှုတ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဝါသနာကြီးခဲ့သလား။ မိုးကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်တိုင်း ကြယ်တွေရဲ့အလွန်မှာ ဘာတွေများရှိနေမလဲဆိုပြီး စူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်းနေတာလား။ မပြည့်စုံတဲ့သူတွေကို မြင်တိုင်း နှလုံးသားကိုက်ခဲမှုကို ခံစားရသလား။ လူတွေရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အမှတ်ရဆုံးနေ့တွေမှာ အလှဆုံးဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးသူအနေနဲ့ ပါဝင်ချင်ခဲ့သလား။ လူ့ခန္ဓာဗေဒနဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေအကြောင်း စပ်စုချင်စိတ်ဖြစ်မိလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားနေတုန်းလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကစ ဘဝတွေတည်ဆောက်ရတာပါပဲ။
ကဲ ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဖြေထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အိပ်မက်ကဘာလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်ပါတော့။ တစ်မြို့လုံးကို အပေါ်စီးကနေမြင်နေတဲ့ တန်ဖိုးမြင့်အိမ်ရာတစ်ခုပေါ်က ကိုယ်လား။ ကမ္ဘာပတ်ပြီး သဘာဝရဲ့ အလှတရားတွေကို ခံစားနေမယ့်ကိုယ်လား။ ကိုယ့်စီးပွားရေးကိုယ် တည်ထောင်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားတွေကို စီမံခန့်ခွဲနေမယ့် ကိုယ်လား။ ဒါမှမဟုတ် NGO တစ်ခုခုမှာ ကိုယ့်အချိန်တွေမြှုပ်နှံထားပြီး လူသားတွေအကျိုးပြုနေရရင်ကို ပျော်နေမယ့် ကိုယ်လား။ ဒါမှမဟုတ် ရိုးရှင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းဘဝမှာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးနဲ့ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းမယ့် ကိုယ်လား။ ကိုယ့်အိပ်မက်ကိုယ် သေချာသိပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီကိုရောက်အောင် သွားပါတော့။
အိပ်မက်ဆီ ရောက်အောင်သွားဖို့ စမ်းတဝါးဝါးလျှောက်နေလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ တိကျတဲ့ မှတ်တိုင်လေးတွေ ထားသွားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အိပ်မက်ဆီရောက်ဖို့ ဘယ်အဆင့်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လိုလိုအပ်ချက်မျိုးတွေကို ပြုပြင်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ? ခဏလေးနဲ့တော့ ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နှလုံးသွင်းထားရပါမယ်။ သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် ကျရှုံးမှုတွေ ရင်ဆိုင်ရပါမယ်၊ နှောင့်နှေးစရာကိစ္စတွေ ကြုံရပါမယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ရှည်ပါ။ ယုံကြည်ချက်ရှိပါ။ ပြီးတော့ ဆက်သွားပါ။ လုံ့လရယ် ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယ် စိတ်အားထက်သန်မှုရယ် ယုံကြည်မှုရယ်က သွားရမယ့်ခရီးအတွက် ဖိနပ်ကောင်းတစ်စုံဖြစ်စေမှာပါ။ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ပါ၊ အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပါ၊ တိုးတက်မှုကို ဆာလောင်ပါ၊ စွန့်စားဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
အိပ်မက်ဆိုတာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုတာ ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရဆီ ရောက်အောင်လှမ်းတဲ့ လမ်းပါ။ စွန့်စားရင် စွန့်စားသလောက် အောင်မြင်မှုတွေ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အပိုင်သိမ်းနိုင်မယ့် စွန့်စားခန်းတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ပြန်ဆန်းစစ်ပြီး အိပ်မက်လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်ဖို့ အသင့်ပြင်လိုက်ပါတော့။ ယုံကြည်မှုကိုပါ တစ်ပါတည်း အိတ်ထဲထည့်သွားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ကိုယျ့အတှကျကိုယျ လကျခုပျတီး၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အားပေးရငျး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျလိုကျပါ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဘာလို့ ကနျ့သတျနရေတာလဲ။ ကိုယျဒီထကျပိုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့ ယုံကွညျခကျြတှဘောလို့ နညျးပါးနရေတာလဲ။ ကိုယျ့အိပျမကျကို ကိုယျ ဆုပျကိုငျဖို့ ကွောကျနစေရာမလိုပါဘူး။
စိတျပညာဗဒေမှာသုံးတဲ့ သိပျလှတဲ့ စာကွောငျးတဈကွောငျးရှိတယျ။ ‘Nurture the Nature.’ – ‘သဘာဝကို မွတေောငျမွှောကျပေးပါ’ တဲ့။ သဘာဝဆိုတာ ဘာလဲ။ သဘာဝဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ မှေးရာပါ အရညျအသှေး၊ စိတျအားထကျသနျမှုနဲ့ ပါရမီတှပေါ။ ဒါဆိုမွတေောငျမွှောကျပေးဖို့ဆိုတာကရော? ဒါကတြော့ တဈယောကျတညျး လုပျဖို့မလှယျဘူး။ မိသားစု၊ အပေါငျးအသငျး၊ အသိုငျးအဝိုငျး၊ ပတျဝနျးကငျြစတာတှရေဲ့ အားပေးမှု၊ ထောကျခံမှုတှေ လိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခကျတာက လူမှုပတျဝနျးကငျြဆိုတာကလညျး သူမြားဖွဈမွောကျတာကို ဝမျးသာပေးဖို့ထကျ ဝဖေနျလိုကျမယျ၊ ရှုံ့ခလြိုကျမယျ၊ ဆှဲခလြိုကျမယျဆိုတဲ့ဘကျကို ပိုအားသနျနကွေတာပဲ။ အားပေးရမယျ့အစား Hate speech တှဖွေနျ့ရတာကို ပိုခုံမငျကွပါတယျ။ လကျခံပေးရမယျ့အစား တှနျးထုတျကွတယျ။ ကိုယျနဲ့ကှဲပွားတာနဲ့ပဲ တဈဆငျ့နိမျ့အဖွဈ သတျမှတျပွီး ဆှဲခကြွတယျ။ သိပျကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။
ဆိုတော့ အမြားစုက အဲ့လိုဖွဈနလောကွတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့သဘာဝကို ကိုယျတိုငျ မွတေောငျမွှောကျမှပဲ အပငျပေါကျမယျ့ကိနျး ဆိုကျလာပါပွီ။ ငါ့ကိုတော့ဖွငျ့ ဘယျသူက မပံ့ပိုးဘူး၊ ဘယျသူက မထောကျခံဘူး၊ ဘယျသူက အားမပေးလို့ ဆကျမလုပျနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ရှုံးပါပွီ။ ကိုယျ့မွကေိုယျ့ရမှော သဘာဝအတိုငျး အညှနျ့တလူလူပေါကျရမယျ့ အပငျဟာ သူမြားကြှေးတဲ့ ဓါတျမတညျ့ မွသွေဇာတှစေားပွီး ပိနျပိနျလိနျလိနျနဲ့ အသီးမအောငျဘဲ ရှငျတယျဆိုရုံလောကျနဲ့ ဆကျသှားရတော့မှာပါ။ အဲဒီတော့ သူမြားလကျခုပျတီးပေးတာကို ထိုငျမစောငျ့ပါနဲ့တော့၊ ကိုယျ့အတှကျကိုယျ လကျခုပျတီး၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အားပေးရငျး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျလိုကျပါ။ အဲဒီအခါ သတ်တိနဲ့အတူ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘယျလိုခဈြရမလဲဆိုတာကိုပါ သငျယူလာနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> ငယျငယျတုနျးက မကျခဲ့တဲ့ လထေဲက အိပျမကျမြား
ဒါပမေဲ့ ပထမဆုံး ကိုယျဘယျသူလဲဆိုတာ ဆနျးစဈဖို့လိုလာပါပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျမေးပါ။ ကိုယျဘာအတှကျ စိတျအားထကျသနျလဲ။ ကိုယျဘယျလို နာမညျအတပျခံခငျြလဲ။ တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို ခဈြလှနျးလို့ သူတို့အတှကျ ကူကယျရာတဈခုအဖွဈ ရှငျသနျခငျြတာလား။ ကငျမရာရှရေ့ောကျသှားတဲ့အခါ စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ကိုယျ့နှလုံးခုနျသံတှေ မွနျနသေလား။ ငယျငယျတညျးက တူရိယာတှကေို တီးမှုတျကွညျ့ခငျြတဲ့ ဝါသနာကွီးခဲ့သလား။ မိုးကောငျးကငျကွီးကို မော့ကွညျ့တိုငျး ကွယျတှရေဲ့အလှနျမှာ ဘာတှမြေားရှိနမေလဲဆိုပွီး စူးစမျးလိုစိတျပွငျးနတောလား။ မပွညျ့စုံတဲ့သူတှကေို မွငျတိုငျး နှလုံးသားကိုကျခဲမှုကို ခံစားရသလား။ လူတှရေဲ့ အရေးကွီးဆုံး အမှတျရဆုံးနတှေ့မှော အလှဆုံးဖွဈအောငျ ပံ့ပိုးသူအနနေဲ့ ပါဝငျခငျြခဲ့သလား။ လူ့ခန်ဓာဗဒေနဲ့ စိတျအခွအေနတှေအေကွောငျး စပျစုခငျြစိတျဖွဈမိလား။ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျဘာဖွဈခငျြတာလဲဆိုတာကို စဉျးစားနတေုနျးလား။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈပါ။ ကိုယျဘယျသူလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးကစ ဘဝတှတေညျဆောကျရတာပါပဲ။
ကဲ ကိုယျဘယျသူလဲဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အဖွထေုတျလို့ရပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျ့အိပျမကျကဘာလဲဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျမေးကွညျ့ပါတော့။ တဈမွို့လုံးကို အပျေါစီးကနမွေငျနတေဲ့ တနျဖိုးမွငျ့အိမျရာတဈခုပျေါက ကိုယျလား။ ကမ်ဘာပတျပွီး သဘာဝရဲ့ အလှတရားတှကေို ခံစားနမေယျ့ကိုယျလား။ ကိုယျ့စီးပှားရေးကိုယျ တညျထောငျပွီး လကျအောကျငယျသားတှကေို စီမံခနျ့ခှဲနမေယျ့ ကိုယျလား။ ဒါမှမဟုတျ NGO တဈခုခုမှာ ကိုယျ့အခြိနျတှမွှေုပျနှံထားပွီး လူသားတှအေကြိုးပွုနရေရငျကို ပြျောနမေယျ့ ကိုယျလား။ ဒါမှမဟုတျ ရိုးရှငျးတဲ့ ဝနျထမျးဘဝမှာ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးနဲ့ ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွတျသနျးမယျ့ ကိုယျလား။ ကိုယျ့အိပျမကျကိုယျ သခြောသိပွီဆိုရငျတော့ အဲဒီကိုရောကျအောငျ သှားပါတော့။
အိပျမကျဆီ ရောကျအောငျသှားဖို့ စမျးတဝါးဝါးလြှောကျနလေို့တော့ မဖွဈပါဘူး။ တိကတြဲ့ မှတျတိုငျလေးတှေ ထားသှားဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့အိပျမကျဆီရောကျဖို့ ဘယျအဆငျ့တှကေို ကြျောဖွတျရမှာလဲ၊ ဘယျလိုလိုအပျခကျြမြိုးတှကေို ပွုပွငျရမှာလဲ၊ ဘယျလောကျကွာမှာလဲ? ခဏလေးနဲ့တော့ ရောကျမှာမဟုတျဘူးဆိုတာကို နှလုံးသှငျးထားရပါမယျ။ သှားတဲ့လမျးတဈလြှောကျ ကရြှုံးမှုတှေ ရငျဆိုငျရပါမယျ၊ နှောငျ့နှေးစရာကိစ်စတှေ ကွုံရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျရှညျပါ။ ယုံကွညျခကျြရှိပါ။ ပွီးတော့ ဆကျသှားပါ။ လုံ့လရယျ ခိုငျမာတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြရယျ စိတျအားထကျသနျမှုရယျ ယုံကွညျမှုရယျက သှားရမယျ့ခရီးအတှကျ ဖိနပျကောငျးတဈစုံဖွဈစမှောပါ။ ဘဝကိုရငျဆိုငျပါ၊ အမှားတှကေနေ သငျခနျးစာယူပါ၊ တိုးတကျမှုကို ဆာလောငျပါ၊ စှနျ့စားဖို့ မကွောကျပါနဲ့။
Related Article >>> မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမှနျတကယျဖွဈလာဖို့
အိပျမကျဆိုတာ ဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒတဈခုဆိုတာထကျ ပိုပါတယျ။ အိပျမကျဆိုတာ ဘဝရဲ့ အနှဈသာရဆီ ရောကျအောငျလှမျးတဲ့ လမျးပါ။ စှနျ့စားရငျ စှနျ့စားသလောကျ အောငျမွငျမှုတှေ၊ စိတျကနြေပျမှုတှေ၊ ပြျောရှငျမှုတှကေို အပိုငျသိမျးနိုငျမယျ့ စှနျ့စားခနျးတဈခုပါ။ ကိုယျဘယျသူလဲဆိုတာကို ပွနျဆနျးစဈပွီး အိပျမကျလမျးကွောငျးပျေါလြှောကျဖို့ အသငျ့ပွငျလိုကျပါတော့။ ယုံကွညျမှုကိုပါ တဈပါတညျး အိတျထဲထညျ့သှားဖို့ မမနေဲ့နျော။
Tags: dream, give up, Grab, her club, Hope, Motivation, taste, Try
Myat Moe December 7, 2018
အောင်ကျော်ချမ်းအေး မန္တလေးကို သွားလည်ခဲ့ရင် ဒါတွေစားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့
Sugar Cane May 2, 2019